Atụmatụ Ọdịnaya na njikarịcha Ọdịnaya
Gbanyụọ na achọpụtara m na ụfọdụ ndị mgbasa ozi mmekọrịta na-agwa ụlọ ọrụ ọ dịghị mkpa ebe ha na-ekere òkè na mgbasa ozi mmekọrịta, naanị na ha n'ezie do. Ndị ọzọ na-arụ ụka mmepe nke a usoro mgbasa ozi ọha na eze tupu ịmalite.
Enwere ajụjụ ise ị kwesịrị ịjụ onwe gị mgbe ị na-eke ọdịnaya na weebụ:
Ebee ka ekwesịrị itinye ọdịnaya? - ikpo okwu ị na-etinye ọdịnaya ya kwesịrị ka mma maka ndị na-ege ntị ịchọrọ ịchọrọ. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ iru ndị ọrụ njin ọchụchọ, kpachara anya na ị na-eji usoro ikpo okwu nke kachasị maka ngwa ọchụchọ. Ọ bụrụ n’ịgbalị iru ndị ọrụ azụmaahịa, gbaa mbọ hụ na ị lekwasịrị anya na netwọkụ ndị na-ahụ maka azụmaahịa. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịnye vidiyo dị elu, tinye ya n'elu ikpo okwu nke nwere ike ijere ya ozi.
Kedu ka ekwesịrị itinye ọdịnaya? - ọdịnaya dị n'ebe ahụ iji kpoo okporo ụzọ, na n'ikpeazụ, azụmahịa maka ụlọ ọrụ gị. Idebe ọdịnaya gị na ịkpọ oku iji rụọ ọrụ ndị dị mkpa maka ịkwọ ụgbọala dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-ede otu tweet ma chọọ ka e degharịa, hapụ ụlọ gafere mkpụrụ edemede 140 maka ndị nnata ma ọ bụ nkwupụta.
Kedu ọdịnaya kwesịrị itinye? - ọdịnaya nke kwesiri ịdọta okporo ụzọ n'ụzọ zuru oke nwere ike ịdị mkpa ịdị na-ewe iwe karịa ọdịnaya nke naanị dabara na mkpụrụedemede ọchụchọ maka nnweta engine. Ọdịnaya dị n'ime akwụkwọ ntanetị kwesịrị ịbụ obere mkparịta ụka ma ahazi ya. Ọdịnaya dị n'ime blọọgụ kwesịrị ịchịkọba ya, tinyekwara onyonye nnọchi anya ya, yana ụdị edemede mkparịta ụka.
Kedu mgbe ekwesịrị itinye ọdịnaya ahụ? - Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịdọrọ ndị mmadụ na mmemme, hazie atụmatụ ịbelata ọdịnaya tupu, n’oge na mgbe ihe omume ahụ kwalite. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ndị na-ege gị ntị were azụmaahịa, bipụta ya n’ụbọchị izu ụka. Mara mgbe ị ga-ebipụta ọdịnaya nwere ike ibuli ngbanwe gị.
Ugboro ole ka m kwesiri itinye ọdịnaya ahụ? - oge ufodu, ikwughari ozi a nwere ike ime ka ndi mmadu gbanwee. Mgbe ụfọdụ ide ihe otu ugboro n'ọnwa n'otu isiokwu nwere ike ibute ogo nnweta ka mma karịa ịde ya otu ugboro na ịkwụsị. Atụla egwu ịmeghachi onwe gị. Ndị ọbịa na-alọghachi na-echefu (ma ọ bụ chọọ ncheta) na ndị ọbịa ọhụụ nwere ike ọ gaghị ahụ ozi ahụ mbụ.
Wụpụ ọdịnaya na weebụ na-enweghị usoro nwere ike ị nweta nsonaazụ ụfọdụ mana ọ gaghị ebuli ma bulie ọrụ ị na-arụ ike. O siri ike ịzụlite ọdịnaya nke na - emetụta ya - zaa ajụjụ ụfọdụ gbasara ọdịnaya ị na-ede kama ị ga-atụfu ya.
Tags: akwụkwọ akaego efunzaghachi onye ọrụechiche onye ọrụ